Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: ရွှေ.ပြောင်းနေထိုင်သူများအကြားအေအိုင်ဒီအေက်စ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းစိုးရိမ်းစရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို.ရောက်ရှိ နေသည်ဟု အာဆီယံ-ယူအန်ပူးပေါင်းလေ့လာချက်မ
ရွှေ.ပြောင်းနေထိုင်သူများအကြားအေအိုင်ဒီအေက်စ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းစိုးရိမ်းစရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို.ရောက်ရှိ နေသည်ဟု အာဆီယံ-ယူအန်ပူးပေါင်းလေ့လာချက်မ
ရွှေ.ပြောင်းနေထိုင်သူများအကြားအေအိုင်ဒီအေက်စ်ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းစိုးရိမ်းစရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို.ရောက်ရှိ နေသည်ဟု အာဆီယံ-ယူအန်ပူးပေါင်းလေ့လာချက်မှာဖော်ပြ
(ဂျာကာတာ.အေအက်ဖ်ပီသတင်း) အရှေ.တောင်အာရှတစ်ဝိုက်မှာသန်းနဲ့ချီသောရွှေ.ပြောင်းနေထိုင်သူများဟာ အေအိုင်ဒီအက်စ်နှင့်ပတ်သက်သောဝန်ဆောင်မှုများ၊ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာကာကွယ်မှုများ ကင်းမဲ့မှုကြောင့် အိခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်မှုနှုန်းစိုးရိမ်းစရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်သို.ရောက်ရှိနေသည်ဟု သောကြာနေ.ထုတ် အာဆီယံ-ယူအန်ပူးပေါင်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါသည်၊
အချက်အလက်စုံစုံလင်လင်နဲ.ဖော်ပြထားသော ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းရှိ ရွှေ.ပြောင်းနေထိုင်သူငါးဖမ်းအလုပ်သမားများမှာအိတ်ခ်ျ အိုင်ဗွီကူးစက်မှုနှုန်း(၉)ဒဿမရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါသည်၊
ဖိလစ်ပိုင်းမှာအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်ခံရသူ၏မှတ်ပုံတင်ထားသူ(၃၅)ရာခိုင်နှုန်းဟာရွှေ.ပြောင်းနေထိုင်သူများဖြစ်နေပြီး လာအို နိုင်ငံမှာ(၃၀)ရာခိုင်နှုန်းဂဏန်းသို.ရောက်သွားပါသည်၊
ရွှေ.ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် အရှေ.တောင်အာရှနိုင်ငံများ၏အမျိုးသားစီးပွားရေးအတွက် သက်ဝင်အင်းအားတစ်ရပ်ဖြစ် နေပေမဲ့၎င်းတို.၏အခွင့်အရေးကာကွယ်ပေးရေး၊အိတ်ခ်ျဗွီတားဆီးပေးရေးနှင့်စောင့်ရှောက်ပေးရေးနေရာမှာ မေ့ပစ်ထား လေ့ရှိသည် ဟု ကုလသမဂ္ဂဖွံ.ဖြိုရေးစီမံကိန်း၏ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Ajay Chhibber ပြောပါသည်၊
ဒေသတွင် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်ခံထားရသူ(၁)ဒဿမ(၅)သန်းကျော်ကျော်ရှိပြီးသူတို.အများစုဟာ အလုပ်လုပ်တဲ့အရွယ်များ ဖြစ်သည် ဟုအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြပါသည်၊
အာဆီယံနိုင်ငံများ၏အမျိုးသားစီမံကိန်တွင်ရွှေ.ပြောင်းနေထိုင်သူများနှင့်၎င်းတို.၏လိင်ဆက်ဆံအဖော်များကို စိုးရိမ်း စရာအဆင့်မြင့်ဆုံးသူများအဖြစ်ထည့်တွက်ထားသော်လည်းသူတို.၏လိုအပ်ချက်များကိုစီစဉ်ပေးခြင်း၊ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေး
ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ပေးခြင်းစသောပြည့်ဝစုံလင်သောအစီအစဉ်များမရှိသေးကြောင်း ကုလသမဂ္ဂအေအိုင် အေက်စ်၏ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ JVR Prasada Roi ကပြောပါသည်၊
အစီရင်ခံစာတွင် အရှေ.တောင်အာရှ(၁၀)နိုင်ငံများအတွင်းအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်မှုများအကြောင်းနှင့်အတူ လက်ရှိရွှေ.ပြောင်းနေထိုင်သူများစံနမူနာ၏ပထမဆုံးအကြိမ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာချက်များပါဝင်စေသည်၊
ကမ္ဘောဒီယာ၊မြန်မာ၊နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံများတွင် အရွယ်ရောက်သူများအိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်မှုနှုန်း(၁)ဒဿမ(၅)ရာခိုင် နှုန်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏အဆိုးဝါးဆုံးကူးစက်ခံနေရတဲ့နိုင်ငံများဖြစ်ပါသည်၊
ကမ္ဘောဒီယာ၊အင်းဒိုနီရှား၊လာအို၊ဖိလစ်ပိုင်းနှင့်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများသည်ပြည်ပနိုင်ငံများမထွက်ခွာခင် အိတ်ခ်ျအိုင် ဗွီကာကွယ်ရေးသင်တန်းများသင်ပေးထားပါသည်၊
ASEAN-UN study finds migrants vulnerable to AIDS
JAKARTA (AFP) -– Millions of migrants across Southeast Asia are vulnerable to HIV infection as they lack access to AIDS-related services and legal or social protection, an joint ASEAN-UN report said Thursday.
""Migrant workers areavital force to national economies in Southeast Asia, yet when it comes to protecting their rights and ensuring HIV prevention and treatment, they are often among the forgotten,"" United Nations Development Program regional director Ajay Chhibber said.
Risk behavior and HIV infection rates were considerably higher among migrants than in the general population.
""While migrants and their sexual partners are included asavulnerable group in the national strategic plans of ASEAN countries, comprehensive programs to address their needs have yet to be developed, funded and implemented,"" UNAIDS regional director JVR Prasada Rao said.
The report included for the first time an analysis of current migration patterns along with HIV infection in ASEAN's 10 member countries
In some of ASEAN's worst affected countries, such as Cambodia, Myanmar and Thailand, over 1.5 percent of the adult population had been infected with HIV.